Thwebula Free Studio 6.7.2.909 – Vessoft
WindowsAbanyeEzinye softwareFree Studio
Isigaba: Ezinye software
Ikhasi elisemthethweni: Free Studio
I-Wikipedia: Free Studio
Free Studio – a set of software ewusizo kusuka DVDVideoSoft developers. I iphakethe kuhlanganisa isofthiwe ukulanda okuqukethwe alalelwayo video kusukela popular video amasevisi. Studio Mahhala iqukethe isofthiwe ukuguqula alalelwayo video format lwamafayela. Kukhona kungenzeka ukucubungula okuqukethwe video kanye nomsebenzi nezithombe. Studio Mahhala kuhlanganisa i Umbuso indawo ukuba ashise futhi nisebenze CD. Free Studio Ubuye amathuluzi ukuguqula ngetakhiwo abezindaba zibe takhiwo ezingasetshenziswa sasiphinda kumadivayisi eselula ezahlukene.
Thwebula of video kusuka ku-YouTube
Ukuguqulwa alalelwayo ifomethi
Ukucubungula okuqukethwe video
Capture of video kusukela Skype
Burning CD kanye DVD
Thwebula Free Studio
Mahhala I-Torrent Download – ithuluzi elinamandla lokulanda amafayela wesifufula. Isoftware isekela imisebenzi eyisisekelo yamakhasimende esifufula futhi ikuvumela ukubuka kuqala amafayela we-multimedia.
Umhleli Womsindo Wamahhala – ithuluzi elilula ukusebenza namafomethi wefayela lomsindo athandwayo. Isoftware ikuvumela ukuthi uhlele futhi ukhiphe amathrekhi womsindo kumafayili evidiyo.
I-Screen Video Recorder yamahhala – ithuluzi elihlangene lokuthwebula ividiyo nezithombe kusuka kusikrini sakho. Isoftware ivumela ukusindisa amafayela wevidiyo ngefomethi ye-AVI futhi ithwebule isikrini sesikrini esigcwele.
Amazwana ku Free Studio
Free Studio software ehlobene
Isofthiwe yokugqamisa isikhombisi segundane ngombuthano onemibala, indawo ezungeze isikhombimsebenzisi esizindeni esivulekile futhi ukudweba ngesishilo esikrinini.
I-Easy Cut Studio – isofthiwe yokuphrinta, ukuklama nokusika izinhlobo ezahlukene zehluzo ngokusebenzisa umsiki we-vinyl noma umgodi wokusika.
Lena ithuluzi elilula lokusebenzisa elihlola isofthiwe yakho efakwe kwikhompyutha futhi ikwazisa mayelana nezibuyekezo ezintsha.
Ama-CmapTools – ithuluzi lokwakha imidwebo ehlelekile namamephu emiqondo. Isoftware ilungele kahle imfundo, ukuqoqwa kwemininingwane nokuqagela ingqondo.
I-Monphase – isoftware yezinkanyezi enikeza imininingwane eningiliziwe mayelana nezigaba ezehlukene zeNyanga ngonyaka okhethiwe, inyanga nosuku.
I-Dia – isoftware yokusebenza nezinhlelo zamazinga ahlukahlukene obunzima. Futhi, isekela ukukalwa futhi isebenza ngezendlalelo.
Lena isofthiwe ye-antivirus enezinga eliphakeme lokuthola amagciwane kanye ne-malware, okuvikela ngokuqinile ikhompyutha yakho ngesikhathi sangempela.
Le software iklanyelwe ukuhlukumeza amafayela namafolda ngabanye ngaphandle kwesidingo sokuphazamisa wonke i-hard drive.
Ithuluzi ukuzohlola alungise amaphutha ohlelweni. Futhi isofthiwe kwenza ukuba defragment idrayivu kanzima.